China fiberglass self-Yesigcilikisha tape ifektri kanye nabaphakeli | Yuniu
I-fiberglass itheyiphu yokunamathisela yenziwe nge-fiberglass mesh njengezinto eziyisisekelo futhi yahlanganiswa ne-emulsion yokuzilibazisa. Umkhiqizo uyazinamathisela, uphakeme ngokuvumelana, futhi unamandla ekuzinzeni kwesikhala. Kuyinto ekahle embonini yezokwakha ukuvimbela imifantu ezindongeni nasesilingini.
Ukumelana 4.Good alikhali
Ithebula le-1.Glass fiber nguMlilo, umswakama nesikhunta, akukho imifantu, amabhamuza.
Ibhodi le-2.Gypsum liqinisa amalunga we-plaster futhi lilungisa imifantu, izimbobo ku-drywall.
3.Ixhuma ibhodi ye-gypsum, ibhodi lezinhlayiya, i-hardboard nezinye izinto zeshidi.
Amalunga we-4.Ukunamathisela amafreyimu omnyango newindi ezindongeni.
5.Sizing of imifantu, amakhona kanye amalunga ngokhonkolo, ukhonkolo evele.
Ukuze kuqiniswe ngokuqhubekayo izindonga nophahla.
Ngokuya ngosayizi we-fiberglass we-fiberglass, ifilimu yepulasitiki, bese ifakwa ku-carton.
Ukuthunyelwa: olwandle noma ngendiza
Ukulethwa Kwemininingwane: Izinsuku eziyi-15-20 ngemuva kokuthola inkokhelo kusengaphambili
I-Hebei Yuniu fiberglass Manufacturing Co., Ltd, esungulwe ngo-2012, ingumkhiqizi we-fiberglass ochwepheshe enyakatho neChina, etholakala eGuangzong County, Xingtai City, esifundazweni sase-Hebei. Njengomsebenzi webhizinisi le-fiberglass, ikakhulukazi elenza futhi lisabalalise anhlobonhlobo imikhiqizo ye-fiberglass yohlobo lwe-E, efana ne-fiberglass roving, imicu ye-fiberglass eqoshiwe, i-fiberglass strand mat eqoshiwe, i-fiberglass eyelukiweyo ezulazulayo, umata odingwayo, indwangu ye-fiberglass nokunye. embonini yezokwakha, imboni yezimoto, indawo yezindiza nendawo yokwakha imikhumbi, imboni yamakhemikhali neyamakhemikhali, ezikagesi nezikagesi, ezemidlalo nokungcebeleka, umkhakha osafufusa wokuvikelwa kwemvelo njengamandla omoya, inhlanganisela yokwehluka kwamapayipi nezinto zokwambathisa ezishisayo. imikhiqizo iyahambisana nezinhlaka ezahlukahlukene, njenge-EP / UP / VE / PA njalonjalo.
Inkampani yethu inomnyango wethu wensizakalo ekhethekile ngemuva kokudayiswa, imikhiqizo ijabulele udumo oluphakeme kwezasekhaya futhi ithandwa emakethe yamazwe omhlaba nayo. Umsebenzi wethu ukukhonza ukuthengwa kwezinto eziyinhlanganisela zomhlaba wonke, ukwenza impilo yabantu iphephe kakhulu, kube kwemvelo kakhulu. Kusukela yasungulwa ngo-2012, ne ephelele yokuthengisa iqembu ekhaya aphesheya.Imikhiqizo yethu zithengiswe emazweni ayisishiyagalombili nesithupha.Sinengxenye yemakethe eYurophu, eNyakatho naseNingizimu Melika, e-Australia, e-Afrika, eMiddle East naseNingizimu-East I-Asia. Sinikeze ithuba, futhi sizokubuyisela ngokwaneliseka.Sibheke phambili ngobuqotho ekusebenzisaneni nani sibambene.
1.Yini abasebenzi bakho be-R & D? Yiziphi iziqu onazo?
Amalungu amathathu ocwaningo lwamazwe omhlaba kanye ne-Development Association yezingilazi eziyinhlanganisela yezinto zokwakha, ubuchwepheshe obuphezulu be-R & D
2. Uyini umbono wakho wokuthuthukiswa komkhiqizo?
Yenza impilo yabantu iphephe futhi ilunge kakhulu imvelo
3.Ungaletha ilogo yamakhasimende akho?
4.Ungakwazi ukukhomba imikhiqizo yakho?
5.Luyini uhlelo lwakho lokuqalisa umkhiqizo olusha?
Kukhona ukwethulwa okusha komkhiqizo njalo ngekota
Langaphambilini IMisa Production 110g 18x14mesh iwindi anezikhala emnyango
Olandelayo: I-fiberglass Direct Roving